मुद्रण डिजाइनरको 10 सुनौलो नियम - Print Peppermint
घर / डिजाइन ब्लग / असंगठित / मुद्रण डिजाइनर को 10 सुनौलो नियम
एक डिजाइनरको रूपमा, तपाइँ सायद टाइपोग्राफी र ग्राफिक डिजाइनको संसारमा पहिले नै राम्रोसँग निपुण हुनुहुन्छ। तर जब यो तपाइँको डिजाइन छाप्न को लागी आउँछ कागज, तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ कि उनीहरूलाई उनीहरूको उत्कृष्ट देखाउनमा जान्छ।
लाई मदत यो संग समस्या, हामी तपाईसँग 10 साझा गर्न चाहन्छौं गोल्डen मुद्रण डिजाइनरको लागि नियमहरू! तपाईंले यो पोस्ट पढिसकेपछि, तपाईंले थाहा पाउने आशा गर्न सक्नुहुन्छ;
कस्तो प्रकारको कागज प्रयोग गर्न
प्रिन्ट गर्नु अघि तपाइँको फाइल कसरी सेट अप गर्ने
अन्तिम प्रिन्ट रङहरू केबाट बनाइन्छ, आदि।
डुङ्गामा डुबेर आउनुहोस्!
उच्च गुणस्तरको कागज प्रयोग गर्नुहोस्
तपाईं अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, पहिलो नियम छाप्न छ राम्रो गुणस्तरको कागज- यो स्पष्ट छ! तर किन? खैर, सस्तो वा कम -गुणस्तर कागजातहरू तपाईंको डिजाइन सुस्त र बोरिंग देखिनेछ। बारीमा, यसको मतलब यो हो कि मानिसहरूले वास्तवमा यसको सबै अद्भुत सुविधाहरूको कदर गर्नको लागि यसलाई लामो समयसम्म राख्न चाहँदैनन्। यसको शीर्षमा, तिनीहरूले तपाईंको पाठ भित्र लुकेका केही महत्त्वपूर्ण सन्देशलाई पनि याद नगर्न सक्छन्!
तल्लो रेखा हो; यदि कसैले तपाइँको मुद्रित टुक्रालाई उनीहरूको हातमा समात्न चाहँदैन भने, त्यसो भए यसलाई छाप्नुको कुनै अर्थ छैन ... ठीक छ?! त्यसले भन्यो, तपाईंले सधैं प्रयास गर्नुपर्छ र प्रिन्टहरू बनाउँदा व्यावसायिक-ग्रेड सामग्रीहरू प्रयोग गर्नुपर्छ ताकि सबै कुरा सही देखिन्छ।
सुझाव: यदि तपाइँ प्रयोग गर्नुहुन्छ भने यसले पनि मद्दत गर्दछ कागज जसले तपाईंको डिजाइनलाई पूरक बनाउँछ, अर्थात्, यदि यो हो कालो-र-सेतो, त्यसपछि सेतो वा क्रीम-रंगमा छाप्नुहोस् कागज र यसको विपरित।
प्रिन्ट गर्नु अघि आफ्नो फाइल तयार गर्नुहोस्
दोस्रो सुनen मुद्रणको नियम भनेको फाइलहरू सही रूपमा तयार गर्नु हो। अन्यथा, तपाईं खराब छापको साथ समाप्त हुनुहुनेछ, र यो अरू कसैको लागि पनि असम्भव हुन सक्छ! त्यसोभए हामीले 'तयारी' भनेको के हो? ठीक छ, त्यहाँ सामान्यतया पाँच तत्वहरू छन् जुन तिनीहरूलाई प्रिन्टरहरूसँग उपयुक्त बनाउन ट्वीकिंग आवश्यक छ:
रिजोल्युसन - डीपीआई (डट्स प्रति इन्च): उच्च संख्या, राम्रो
फाइल ढाँचा - धेरै प्रिन्टरहरूले TIFF वा JPEG छविहरू बिना कुनै पनि ह्यान्डल गर्न सक्छन् समस्या तर यदि तपाइँ इलस्ट्रेटर प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँको फाइल EPS ढाँचा (संस्करण 0.92) मा छ। साथै, सधैं CMYK रङ मोड समावेश गर्नुहोस्, र प्रयोग नगर्नुहोस् स्पट रंग बिल्कुल आवश्यक नभएसम्म।
रङ मोड: RGB मनिटरहरूको लागि हो, र CMYK प्रिन्टरहरूको लागि हो
ब्लीड: यदि तपाईंको फाइलमा कुनै महत्त्वपूर्ण जानकारी समावेश छ जुन किनाराको नजिक छाप्न आवश्यक छ भने, तपाईंलाई ब्लीड आवश्यक पर्दछ (डिजाइनको बाहिरी भागमा सेतो किनारा)। अवश्य पनि, यदि यो आलोचनात्मक छैन तर अझै पनि एकसँग राम्रो देखिन्छ - एउटा थप्नुहोस्!
क्रेडिट: Pixart मुद्रण
सुरक्षित क्षेत्र (मार्जिन): सुरक्षित क्षेत्र भनेको तपाईंले राख्नु पर्ने डिजाइनको वरपरको क्षेत्र हो स्पष्ट पाठ, छविहरू, वा कुनै अन्य महत्त्वपूर्ण तत्वहरूको। यसले सुनिश्चित गर्नेछ कि तिनीहरू ठीकसँग छापिएका छन् र प्राप्त गर्दैनन् कट मुद्रण समयमा बन्द।
यदि केहि सही रूपमा प्रिन्ट गर्दैन भने, यो राम्रो हुन सक्छ विचार फाइल लिन फिर्ता केहि अन्तिम tweaking को लागी Illustrator मा, तर सावधान रहनुहोस्; केहि चीजहरू ठीक गर्न सकिँदैन!
भौतिक प्रिन्टमा फाइल जाँच गर्नुहोस्
तपाईंले आफ्नो फाइल सही तरिकाले तयार गरिसकेपछि र यसलाई प्रिन्ट गर्न पठाउनुभएपछि, मुद्रण प्रक्रियामा कुनै त्रुटि भए नभएको तपाईंलाई कसरी थाहा हुन्छ? जवाफ सरल छ; केवल एक हार्ड प्रतिलिपि जाँच गर्नुहोस्! यसो गरेर, तपाईं पाउन सक्नुहुन्छ समस्या जस्तै: - Illustrator मा भएका रङहरू मेल खाँदैनन् - गलत ब्लीडहरू - हराएका तत्वहरू जुन त्यहाँ हुनुपर्छ, आदि।
एकचोटि तपाईंले यसलाई आफैं जाँच गर्नुभयो र कुनै आवश्यक परिवर्तनहरू गर्नुभयो, त्यसपछि अन्तिम चरण भनेको प्रिन्टरद्वारा पठाइएको कुरासँग तपाईंको प्रिन्ट तुलना गर्नु हो ताकि तिनीहरूले तिनीहरूको अन्त्यमा त्रुटिहरू जाँच गर्न सकून्।
आफ्नो मुद्रण प्रविधि संग रचनात्मक प्राप्त गर्नुहोस्
आफ्नो लागि चीजहरू सजिलो बनाउन, तपाईंले सधैं सबैभन्दा सामान्य मुद्रण प्रविधिहरू प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ; यसले सफलता सुनिश्चित गर्नेछ र समय बचत गर्नेछ! प्रिन्टका दुई उत्कृष्ट प्रकारहरू हुन् लेटरप्रेस (जहाँ मसी थिचिएको छ कागज) र लिथोग्राफी (एक प्रारम्भिक प्रकारको मुद्रण जसले ढुङ्गा वा धातुको प्लेटहरू प्रयोग गर्दछ जुन मोमी / चिल्लो पदार्थको साथ लेपित गरिएको छ)।
यी मुद्रण प्रविधिहरू सबैभन्दा लोकप्रिय छन् किनभने तिनीहरूले तपाईंलाई उच्च-गुणस्तर परिणाम, र त्यहाँ सामान्यतया छैन मुद्दा तिनीहरूसँग धेरै महँगो छ। यद्यपि, यदि पैसा तपाईंको प्राथमिक चिन्ता होइन भने, यो सधैं अन्य प्रकारका प्रिन्टहरू जस्तै सिल्कस्क्रिन वा नक्काशीसँग प्रयोग गर्न लायक छ! यी दुई मुद्रण प्रविधिहरू सामान्यतया सबैभन्दा महँगो हुन्छन्, तर तिनीहरूले तपाईंलाई शानदार नतिजाहरू दिनेछन्।
प्रमाण माग्न नडराऊ
छवि क्रेडिट: डिजाइनमेटिक
प्रमाण भनेको तपाईको प्रिन्ट कस्तो देखिन्छ भन्ने कुराको एउटा उदाहरण हो, र यो सामान्यतया अन्तिम प्रिन्ट हुनु अघि पठाइन्छ ताकि तपाईले जाँच गर्न सक्नुहुनेछ कि सबै कुरा सही छ, जस्तै, रङहरू मिल्छन् वा ब्लीडहरू ठाउँमा छन्! धेरै प्रिन्टिङ कम्पनीहरूले तपाईंलाई प्रमाण दिँदैनन् जबसम्म तपाईंले सोध्नुभएन, त्यसैले एकको लागि अनुरोध गर्न शर्म नगर्नुहोस्, विशेष गरी यदि यो तपाइँको पहिलो पटक केहि छाप्ने हो भने!
धेरै मा घटनाहरू, जब अन्तिम प्रिन्ट डेलिभर हुन्छ, तिनीहरूले छापिएको डिजिटल फाइल पनि पठाउनेछन्, जसको मतलब कुनै पनि गल्तीहरू सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ। मात्र समस्या यसका साथ यो हो कि कहिलेकाहीँ यसको बारेमा केहि गर्न ढिलो हुन्छ, त्यसैले सावधान रहनुहोस्।
सुझाव: प्रमाण प्राप्त गर्ने सबैभन्दा सरल तरिका भनेको अनलाइन प्रिन्टर प्रयोग गर्नु हो, किनकि तिनीहरूमध्ये धेरैले तपाईंलाई कुनै शुल्क बिना नै दिनेछन्। यद्यपि, यदि तपाइँको प्रिन्ट कम्पनीले यो सेवा प्रस्ताव गर्दैन भने, त्यसो भए किन PDF प्रुफिङ उपकरण प्रयोग नगर्ने Adobe Acrobat, जसले तपाईंलाई Illustrator, Photoshop, वा InDesign मा कागजातहरू प्रमाण गर्न अनुमति दिन्छ?
उत्पादन गर्न आउँदा यो सम्भवतः सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण टिप हो गुणस्तर छापहरू; आफ्नो समय लिनुहोस्! किन? ठिक छ, किनकि यदि तपाईंले गर्नुभएन भने, त्यहाँ तपाईंको छाप्ने काम बर्बाद हुने जोखिम छ, र कसैले पनि आफ्नो हातमा त्यस्तो चीज चाहँदैन। त्यसोभए डिजाइनहरू प्रिन्ट गर्दा यो दिमागमा राख्नुहोस्, विशेष गरी यदि यो अरू कसैको लागि हो!
यो किनभने तिनीहरू वास्तवमा तिनीहरूको नाम छाप्नु अघि व्यक्तिगत रूपमा डिजाइन हेर्न चाहन्छन् र सही रूपमा। अर्को शब्दमा, यदि तपाइँ एक कम्पनीको लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँको प्रिन्टहरू सही रूपमा डेलिभर गरिएको छ र गल्तीहरूले भरिएको छैन भनेर सुनिश्चित गर्नुहोस्। सम्झनु, गुणस्तर हरेक पटक मात्रा भन्दा बढी।
सुझाव: आफ्नो प्रिन्टरसँग धैर्य राख्नुहोस् र तिनीहरूलाई सोध्नुहोस् मदत यदि तपाईं अड्कनुभयो भने; तिनीहरूले थप विवरणमा सबै कुरा व्याख्या गर्न सक्षम हुनुपर्छ।
तपाईंले छाप्न चाहेको कुरा थाहा नभएसम्म मुद्रण सुरु नगर्नुहोस्
यो आधारभूत टिप जस्तो लाग्न सक्छ, तर हामीलाई सुन्नुहोस्; धेरै मानिसहरू यस बारे बिर्सन्छन् र अन्तमा केहि प्रिन्ट गर्छन् जुन तिनीहरूको मतलब थिएन जुन कसैलाई राम्रो लाग्दैन। त्यसोभए तपाइँ यसलाई प्रिन्ट गर्न सुरु गर्नु अघि तपाइँको प्रिन्ट के हो भनेर तपाइँलाई थाहा छ भनेर निश्चित गर्नुहोस्; अन्यथा, सबै गडबड हुनेछ!
सुसमाचार यो हो कि धेरै प्रिन्टरहरूले तपाईंलाई चरण-दर-चरण प्रक्रियामा हिंड्न मन पराउँदैनन्, त्यसैले यदि त्यहाँ केहि छैन जुन स्पष्ट, त्यसपछि तिनीहरूलाई फेरि व्याख्या गर्न सोध्नुहोस्। याद गर्नुहोस्, धैर्यता यस खेलमा कुञ्जी हो। त्यसोभए, आफ्नो समय लिनुहोस् र चीजहरू सही गर्नुहोस्!
धेरै सानो डिजाइनहरू प्रिन्ट नगर्नुहोस्
यो तपाईले गर्न सक्नुहुने सबैभन्दा ठूलो मुद्रण गल्तीहरू मध्ये एक हो, त्यसैले यो नगर्नु राम्रो हुनेछ। हो, हामीलाई थाहा छ कि मिनी प्रिन्टहरूका लागि भन्नु पर्ने धेरै कुराहरू छन्, तर यदि तिनीहरू धेरै सानो छन् भने, तपाइँको प्रिन्टरलाई तपाइँ वास्तवमा तिनीहरूमा के छाप्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न समस्या हुन सक्छ, जसले गल्तीहरू र धेरै निराशा निम्त्याउन सक्छ।
त्यसोभए केवल निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले आफ्नो प्रिन्टहरू सही स्केलमा डिजाइन गर्नुभयो; अन्यथा, तिनीहरूले प्राप्त गर्न सक्छन् कट बन्द, धमिलो देखिन्छ, वा केवल छापिने छैन! अर्को शब्दमा, यदि किनारामा केहि महत्त्वपूर्ण छ भने, त्यसलाई झुण्ड्याउन नदिनुहोस् किनकि यसले निम्त्याउनेछ। समस्या रेखा तल थप।
सुझाव: यदि तपाइँ तपाइँको डिजाइन मा ठाउँ सकिदै हुनुहुन्छ भने, किन माथिल्लो कुनामा केहि सानो राख्ने प्रयास नगर्नुहोस् ताकि यो प्राप्त हुँदैन कट बन्द? केवल निश्चित गर्नुहोस् कि त्यहाँ जे छ त्यो महत्त्वपूर्ण छैन; अन्यथा, गल्ती हुनेछ!
तपाईंको फन्टहरू व्यावसायिक हुनुपर्छ
छवि क्रेडिट: Pixart मुद्रण
डिजाइनहरू प्रिन्ट गर्दा फन्टहरू धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, त्यसैले तपाईंले तिनीहरूलाई बनाउन सुरु गर्नु अघि तपाईंको अनुसन्धान गर्न लायक छ। यो किनभने केही फन्टहरू सस्तो वा अव्यवसायिक लाग्न सक्छन्, जसको मतलब समग्र प्रिन्ट राम्रो देखिने छैन जुन कसैले हेर्न चाहँदैन! त्यसोभए केवल निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ पहिले नै पर्याप्त अनुसन्धान गर्नुहुन्छ र राम्रो देखिने र प्रिन्ट सूट गर्ने फन्ट छान्नुहोस्।
सुझाव: फरक प्रयोग गरी हेर्नुहोस् आकारतपाईंको मुख्य पाठको लागि / टाइपफेस यसलाई फरक बनाउनको लागि। यसको शीर्षमा, केर्निङको बारेमा नबिर्सनुहोस् किनभने यदि तपाईंले गर्नुभयो भने, तपाईंको फन्टहरू गन्दा देखिनेछन्, जुन निश्चित रूपमा तपाईंले महत्त्वपूर्ण डिजाइनबाट चाहनुभएको होइन, त्यसैले क्यारेक्टरहरू बीचको स्पेसिङको बारेमा पनि सोच्नुहोस्।
रमाईलो गर्नुहोस्, विभिन्न डिजाइनहरूसँग प्रयोग गर्नुहोस् र सिक्न नछोड्नुहोस्
हामीले पहिले नै भनेझैं, प्रयोग सिक्ने सबैभन्दा राम्रो तरिकाहरू मध्ये एक हो, जसको मतलब तपाईंले जब पनि सक्नुहुन्छ विभिन्न डिजाइनहरू प्रयास गर्नुपर्छ। यो हुनेछ मदत तपाईंको आत्मविश्वास बढाउनुहोस् साथै कुनै पनि महत्त्वपूर्ण भविष्यका परियोजनाहरूमा मद्दत गर्नुहोस् त्यसैले रमाइलो गर्नुहोस् र प्रयोग गर्नुहोस्!
सुझाव: केही उद्धरणहरू राम्रोमा छाप्ने प्रयास गर्नुहोस् कागज or कार्डस्टक व्यक्तिगत स्पर्शको लागि।
त्यसैले त्यहाँ तपाईंसँग छ; शीर्ष 10 सुनमुद्रण डिजाइन को नियम। हामीले भनेझैं, यी नियमहरू महत्त्वपूर्ण छन् र तपाईंले सकेसम्म पालना गर्नुपर्छ। तिनीहरूले गर्नेछन् मदत तपाईंको आत्मविश्वास र भविष्यका छापहरू दुवैको साथ, त्यसैले तिनीहरूलाई सावधानीपूर्वक पछ्याउनुहोस्।
शमूएल म्याथ्यूज एक पत्रकार र प्रो निबन्ध लेखक हुन् NinjaEssays। प्रिन्टिङको लागि बलियो जोशका साथ, म्याथ्युज नयाँ कुरा सिक्न र नयाँ मानिसहरूलाई भेट्न मन पराउँछन्। उनलाई ड्रम बजाउने, घुम्न र खेलकुद पनि मन पर्छ ।
← २०२२ मा वेब विकास प्रचलन र प्रविधिहरू हावी गर्दै
सिरियो रङ (Fedrigoni) – उत्तम रंगीन कागज प्रणाली? →